Egosipụta Flash Banyere Beşikdüzü USB Car Facilities | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyBlack Sea Region61 TrabzonEgosipụta Flash Banyere Beşikdüzü USB Car Facilities
22 / 05 / 2020 61 Trabzon, General, Gondola, Black Sea Region, Isi akụkọ, Turkey, TELPHER
Mkpesa ọkụ gbasara akụrụngwa ụgbọ ala disikduzu
Trabzon Beşikdüzü Member Council Council Member Önder Öztürk kwuru na ụlọ ọrụ ụgbọ ala na-eme ihe megidere nkwekọrịta na Beşikdüzü.
Öztürk kwuru ihe ndị a; “Companylọ ọrụ na-arụ ọrụ Beşikdüzü Cable Car Ihe anaghị emezu ọrụ ya. Dabere na ederede 7 nke nkwekọrịta ahụ, 2019 pasent nke ntụgharị ọ mere na 18.1 akwụbeghị ụgwọ site n'aka ime obodo ruo na Mee 15, 2020. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ enyeghị mpempe akwụkwọ 2019 ruo na njedebe nke Eprel. Egosiri m ndị mmadụ ọnọdụ ahụ. Onweghi onye kwuru na ego adịghị. "
Önder Öztürk kwuru ihe ndị a;
1- E mefuru nde 2018 TL maka akụrụngwa ụgbọ ala, nke Beşikdüzü Municipality mezuru na 120, na 35 nde TL nke ego a bụ nke Iller Bank kpuchitere obere ọmụrụ nwa na afọ iri na ise, na mmezu na enyemaka nke obodo mezuru.
2- Site na nkọwa dị nro nke obodo Beşikdüzü kwadebere, e mere ya ka ọ nwee ọmịiko n'okpuru aha "Mwube na arụ ọrụ nke Hotel na Azụmaahịa forlọ Ọrụ Afọ 29 maka Carlọ Ọrụ Carable na Be atikdağ Tourism na Egwuregwu Egwuregwu nke Beşikdağ" na obi dịgidere na ụlọ ọrụ a na-akpọ GİZTAŞ A.Ş. Edebanyela ya.
3- Ebe ọ bụ na a hụrụ na ụlọ ọrụ Giztaş A.Ş emezughị ọrụ ya n'okpuru Nkọwapụta Tender na Nkwekọrịta a mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, a kwụsịrị nkwekọrịta ahụ n'ihi ọdịmma nke Be ofikdüzü Municipality na ndị ya dabere na isiokwu dị mkpa nke nkwekọrịta ahụ.
4- Ebe ọ bụ na amaara ụlọ ọrụ Giztaş A.Ş ka o merie Tele-tender Tender of Afyon Municipality tupu Beşikdüzü, aghọtara na kọntaktị ndị metụtara anyị kpọtụrụ anyị na mpaghara abụọ ahụ. Ka emechara ntuli aka nke March 30 nke 2019 nke ime obodo abụọ a, ndị nchịkwa ọhụrụ ahụ kwụsịrị site na iji nkọwa nro na ikike si na nkwekọrịta ahụ. Edekọtara ọnụ ego nke ụlọ ọrụ a, nke bụ ihe dị ka nde 10 TL, nke enyere obodo, ka edepụtara ya ka ọ bụrụ ego ndị obodo.
5- N'oge usoro nkwụsị nke Beşikdüzü, ụlọ ọrụ Giztaş kwupụtara na ọ chọrọ iji nhọrọ COMMON RECEPTION, nke a bụ n'ihi nkwekọrịta ahụ. Ebinye aka na nkwekorita ohuru nke ulo oru a bu AFRİNA, ma kwe nkwa na ha g’esi mezuo oru ndi a n’ime ya na nkwekorita ya, na nkwekorita ohuru na ndi ime obodo, Giztaş na Afrina.
6- Onye nwe ụlọ ọrụ Afrina bụ nwa amaala Saudi Arabia. N'ikwekọ na nkwekọrịta ahụ, ọ kwụsịrị ego nke TL 10 nde na Beşikdüzü Mpaghara, gụnyere ọmịiko gabigara ókè. Na mgbakwunye, a na-ewu ebe a na-adọba ụgbọala n'akụkụ ebe obere ọdụ na ebe a na-ere ihe, ụlọ ọrụ dị elu amalitela iwu ụlọ nkwari akụ nke bywa nwere nke Obodo. Ndị a bụ ọrụ dị mkpa na nkọwapụta ọmịiko.
7- Ma mgbe ntuli aka ahụ na Machị 30, 2019, Ndị Ọrụ Nchịkwa Ọchịchị, nke bịara ike mgbe ntuli aka ahụ gasịrị, tụtara ụlọ ọrụ Teleferik otu nde ihe ngosi TL na-ezighi ezi. Na mgbakwunye, okwu na-adịghị mma nke Onye isi obodo mere maka ndị Arab na-etinye ego na ọgbakọ Trabzon Metropolitan Municipality Assembly (Mee ka okwute gbakọta ma hapụ mpụ. Ka ha hapụ Beşikdüzü.) Mgbe etinyere ya n'akwụkwọ akụkọ, Arab hapụrụ ụlọ ọrụ ụgbọ ala nkịtị na-ahụkarị wee hapụ Be andikdüzü. Ya mere, arụ ọrụ ụgbọ ala ahụ dịgidere na Giztaş, onye ọzọ ya na ya na-arụkọ ọrụ. Ka ọ dị ugbua, na Mee 2020, obodo anakọtara ụzọ n'ụzọ atọ nke ikpe ahịrị.
8- Mgbe onye mmekọ Arab hapụrụ, a kwụsịrị iwu ụlọ ọ bụla. N’ezie, ọ bụrụgodi na ebu na ígwè nke otu ụlọ nkwari akụ a wuru na nzuko a, a na-eresị onye na-ebunye ya ụlọ ọrụ maka n ’ịkwanye ígwè n’ebe a na-adọwa ihe na ebe a na-ete nchara n’elu oche ahụ.
9- N'agbanyeghi ịdọ aka na ntị na ịdọ aka na ntị nke ndị ọrụ aka nke obodo, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ anaghị emezu ọrụ ọ bụla a ga-eme dị na Nkwekọrịta ahụ. Onu ogugu ego nke oru gha eme ihe bu nde TL 20. Site na mkpesa a, gosiputara Mayor Ramis Uzun Bey. Bịa na Disemba afọ 2019, e nyere ụlọ ọrụ ahụ maka ọnwa isii maka Shoppingzụ ahịa, nke a ga-eme na sub-ọdụ. Ka ọnwa Mee dị n’afọ 2020, ka ọ dị ugbu a, awụsara mmiri dị n’ala. Oge ịgbakwunye oge a bụ iwu akwadoghị. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ ahụ nwetara Cable Car Operations na ọnọdụ nke ịrụcha ọrụ ndị a ga-arụ na ọdụ ụgbọ elu dị ka njedebe nke June 2020. Mana rue taa, e kwebeghị mbọ mbọ.
10- Nlekọta nke obodo ahụ ọ ga-aga n'ihu na akwadoro ụlọ ọrụ a, ka ọ ga - afọdụ ime obodo Afyon na Kocaeli Kartepe ga - echekwa ikike ụmụ amaala ya ma dekọtara nkwa nke ụlọ ọrụ ahụ nyere dị ka ego ha ga-enweta, ọ ga - arụpụta nchupu dị ka nkọwa nkwupụta Tender chọrọ na nkwekọrịta ya si banye na Companylọ ọrụ ahụ? Ma ọ bụghị ya, a ga-ekpughe na Onye isi ala na ndị otu Mgbakọ ahụ na-eme mpụ n'oge nyocha nke oflọ Ọrụ Akaụntụ na Ministrylọ Ọrụ nke Mịnịstrị ahụ, a ga-ekpe ha ikpe maka omume ọjọọ na imerụ ọha. Ọ bụ ọghọm ọhaneze ga-emetụta ndị ahụ metụtara. Anyị ga-eche wee hụ. (Isi mmalite: Nkeji edemede 61)
Flash ... Flash..Flash ... Mmiri mmiri nke Baspinar Collapsed The Road Railway (Video)
3 si CHP Pekşen. Mmasị Na-akpali mmasị Maka Aha nke Ọdụ Ụgbọelu
Ihe Nchọpụta Dị Nchọpụta na Mberede YHT: UM 2 Na-eche Banyere Nsogbu Mberede
Orlu'da Train Disaster Edotara Scandal! .. Ndị ahụ gbara akwụkwọ gbakọtara ihe akaebe
Flash! .. Flash! .. Istanbul ọhụrụ metro na-emepe taa (Special News)
Achọghị Ngwá Ọrụ Nche ụgbọelu Tarsus
A na-ekesa TCDD'den Shock Claim Ọrụ Promotion
Beşikdüzü na-ahọrọ ụdị ụlọ maka ụgbọ ala
Ihe omume oru uzo Beşikdüzü nwetara nnukwu nsogbu
Ụgbọ ala Beşikdüzü na-eto ngwa ngwa
Ọganihu na-adọrọ mmasị na Beşikdüzü Cable Car Project
Obodo nke Beşikdüzü
Njem nlegharị anya Besikdag na Sportslọ Egwuregwu Mpụga
Giztaş A.Ş ike
Banyere ọdụ ụgbọ oloko Adana! Accessga n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè Adana yana Akụkọ ya
Emere ya na Nke ikpeazụ nke Besikduzu Cable Car Line
A na-atụle Trabzon Rail system n'etiti Besikduzu na Of
Etula ụgbọ ala Besikduzu Cable Car?
Oge nke anọ na Wiwa Ikpeazụ nke Beşikdüzü Cable Car Pulls